Degso NordVPN loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (18.00 MB)
NordVPN waa mid ka mid ah barnaamijyada VPN ee ugu dhaqsaha badan, aaminka ah ee adeegsadayaasha Windows. Barnaamijka VPN, oo la socda astaamo wanaagsan sida daalacashada aaminka ah, xannibaadda xayeysiiska, baaxadda VPN ee aan xadidnayn, borotokoollada sirta darajada millateriga, wadaagista P2P, waxay bixisaa 7 maalmood oo tijaabo bilaash ah.
NordVPN, oo la yimaada astaamo horumarsan sida barnaamij deg deg ah oo aan xad lahayn oo VPN ah oo u oggolaanaya isku xirka in ka badan 4000 dhakhso ah VPN server-yada 60 waddan, dejinta gaarka ah ee DNS, TCP iyo xulashada maamuuska UDP, iyo Kill Switch oo joojiya barnaamijyada qaarkood inay galaan internetka. kiiska xiriirka VPN, NordVPN waxaa laga heli karaa aaladaha mobilada iyo desktop -ka.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ay tahay in laga helo kombiyuutar kasta oo dalkeenna ah, halkaas oo xannibaadda goobtu ay aad ugu badan tahay. NordVPN, mid ka mid ah barnaamijyada VPN ayaa looga baahan yahay kaliya ma aha inay gasho/gasho goobaha la xannibay/la mamnuucay, laakiin sidoo kale inay awood u yeelato adeegyo aan ka adeegin Turkiga, si loo hubiyo asturnaanta iyo amniga shabakadaha WiFi ee dadweynaha, iyo in si raaxo leh loogu dul maro xawaaraha Goobaha aan xadidnayn sida YouTube, waxay soo jiitaan dadka isticmaala heer kasta. Waxaa suurtagal ah in lagu xiro shabakadaha hal guji oo leh astaamaha SmartPlay, iyo in la bixiyo isku xirka server -ka ugu fiican ee leh Quick Connect. Haddii aad dhaqaajiso astaamaha CyberSec, kaliya kama saari doontid xayeysiisyada meel kasta, laakiin sidoo kale waxaa lagaa ilaalin doonaa hanjabaadaha internetka. Muuqaalka wadaagga P2P ayaa loogu daray kuwa soo dejiya oo soo dejiya faylasha marar badan.
Cabirka Faylka: 18.00 MB